सेयर बजार साक्षरता : के हो विवरणपत्र, कसरी गर्ने अध्ययन ? – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:०८ Basanta Khanal	0 Comments	share
काठमाडौं : अधिकांशलाई थाहा भएकै कुरा हो एउटा राम्रोसँग लेखिएको रेज्यूमे (सीभी) ले रोजगारी पाउने प्रक्रियामा कति ठूलो भूमिका खेल्दछ । आफ्नो योग्यता तथा अनुभव बारे जानकारी गराउने भएकाले रोजगार खोज्ने तथा राजगारी दिने दुवैले राम्रो रेज्यूमेलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । हो त्यसैगरी वित्तीय दुनियाँमा विवरणपत्र (प्रोस्पेक्टस) ले लगानीकर्तालाई त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो रेज्यूमेले रोजगारदातालाई गरेको हुन्छ । विवरणपत्रले कम्पनीको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको हुन्छ । यसले कम्पनीको इतिहास भावी योजना तथा रणनीति अवसर तथा चुनौती र के दिन खोजेको भन्ने लगायत सम्पूर्ण विषयवस्तुमा विस्तृत जानकारी समेटेको हुन्छ । यस्ता जानकारीले लगानीकर्तालाई सुसूचित निर्णय लिन मद्दत गर्दछ । कुनैपनि किसिमको धितोपत्र जारी गर्न खोज्ने कम्पनीले सम्बन्धित नियामकलाई विवरणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको हकमा साधारण सेयर (आइपीओ) डिबेन्चर बोन्ड लगायत धितोपत्रहरु जारी गर्न खोज्ने कम्पनीले नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विवरणपत्र पेश गर्दछन् । धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको विवरणपत्र अनुसार नै धितोपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विवरणपत्रले कम्पनीको इतिहास वित्तीय अवस्था जारी गर्न लागेको धितोपत्रको किसिम जारी गर्ने धितोपत्रको संख्या लगायत जनकारी दिन्छ ।
विवरणपत्र के हो ? विवरणपत्र भनेको सर्वसाधारणलाई जारी गर्न लागिएको नयाँ धितोपत्रको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने औपचारिक दस्तावेज हो । विवरणपत्र धितोपत्र जारी गर्नुअघि नियामक समक्ष पेश गर्नुपर्दछ । विवरणपत्रका आधारमा लगानीकर्ताले सम्बन्धित कम्पनीमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सुसूचित निर्णय गर्न सक्दछन् ।
विवरणपत्रभित्र समावेश हुनसक्ने जानकारीहरु : – कम्पनीको इतिहास तथा यसको व्यवस्थापन समूहका बारेमा जानकारी । – लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणसहित अन्य वित्तीय जानकारी । – भावी योजना रणनीति तथा वित्तीय प्रक्षेपण सम्बन्धी जानकारी । – जारी हुन लागेको धितोपत्रको किसिम संख्या तथा यसको मूल्य सम्बन्धी जानकारी । – धितोपत्र बिक्रीबाट उठेको रकम लगानी सम्बन्धी जानकारी । – जोखिम तथा चुनौती सम्बन्धी जानकारी । – अन्डरराइटरहरु बारे जानकारी
उल्लेखित प्रमुख विषयका अलावा विवरणपत्रबाट लगानीकर्तालाई निर्णय लिन आवश्यक पर्ने अन्य विविध जानकारीहरु हासिल गर्न सकिन्छ । विवरणपत्रले कम्पनीको पृष्ठभूमिदेखि पुँजी वृद्धि गर्नुको उद्देश्यहरु बुँदागत गरी कम्पनीलाई सर्वसाधारणमाझ पारदर्शी बनाउँछ । जारी हुने धितोपत्र बिक्री गरी पुँजी जुटाउन कम्पनीप्रति सर्वसाधारणको चासो र ध्यानाकर्षण गर्नु विवरणपत्रको एक मुख्य उद्देश्यको रुपमा लिन सकिन्छ । विवरणपत्र कम्पनी तथा सम्भावित लगानीकर्ता दुवैका लागि हितकारी मानिन्छ । विवरणपत्र नियामकबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले अवश्यक सूचना लुगाएको अरोपबाट बच्न मद्दत पुग्छ । झूटो विवरण पेश गर्ने कम्पनी कानुनी कारवाहीको भागिदार पनि बन्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ विवरणपत्रले सम्भावित लगानीकर्ताप्रति कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ । त्यस्तै लगानीकर्ताले सम्पूर्ण जानकारी पाउने भएकाले लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन सहज हुन्छ । यद्दपि सबै जानकारी हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले विवरणपत्रलाई अध्ययन गर्नु छुटाउनु मुर्खता हुन्छ ।
कम्पनीको विवरणपत्र कसरी अध्ययन गर्ने ?
कुनै पनि नयाँ धितोपत्र जारी गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीले विवरणपत्र तयार गर्दछन् । यसरी तयार भएको धितोपत्र नियामकले स्वीकृति गरिसकेपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अध्ययन गर्न सक्दछन् । नेपालको हकमा कम्पनीको स्वीकृत विवणपत्र नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा सर्वजनिक रुपमा राख्ने गर्दछ । त्यस्तै सम्बन्धित कम्पनीले पनि धितोपत्र जारी हुनुभन्दा अघि नै आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हुन्छ । कतिपय निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटबाट पनि विवरणपत्र हेर्न सकिन्छ । विवरणपत्रमा कम्पनी तथा निष्कासन हुने धितोपत्रका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको हुनाले अलिक लामो हुने गर्दछ । विवरणपत्रमा भएको हरेक चिज केलाउनैपर्छ भन्ने छैन । आफूलाई आवश्यक विषयमा मात्र अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ । तर एक पटक सम्पूर्ण विवरणपत्र हेर्नु नै फाइदाकारी हुन्छ । अन्त्यमा विवरणपत्र कम्पनीका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको दस्तावेज भएकाले लगानी निर्णयमा यसको सीधा असर पर्न जान्छ । आफूले लगानी गर्न लागेको कम्पनी कस्तो छ भन्ने विषयको विस्तृत जानकारी लिनु एक विवेकशील लगानीकर्ताको गुण पनि हो । यसका लागि विवरणपत्र धेरै हदसम्म फाइदाकारी सवित हुन सक्दछ ।
← शैक्षिक कर्जा कसरि पाउन सकिन्छ ? के के आवश्यक पर्छ ?
ग्यास र खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छुट कसरी लिने ? कहाँ–कहाँ पाइन्छ ? →